Fakafakao: Aza terena handray fanapahan-kevitra...manohitra vahoaka!
2008-04-13 @ 12:58 in Politika
Mahavariana ny tenin'ny filoha RAVALOMANANA Marc raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy teny ampahatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny IVATO.
Asa na hevitra nomasahana tao anatiny tao na fitadiavana hiala amin'ny fanontaniana efa niomanan'ny mpanao gazety fa indroa izy no niteny hoe :"Aza terena handray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny tombontsoam-bahoaka aho!". Anisan'ny namaliana ny antony tsy namelana ny hanatontosana ny fampisehoan'i Rossy manko io teny io. Mampieritreritra ahy io fomba filaza io.
Voalohany, izy ihany ve izany no mpanapa-kevitra amin'izay antsoina hoe tombotsoam-bahoaka? Sa heverina tokoa fa mety hiteraka fanakorontanana eto amin'ny tanàna tokoa ny fanatontosana ny fampisehoana anankiray nandrasan'ny mpankafy azy hatramin'ny ela? Lasa any amin'ny baolina fandaka ihany koa ny eritreritro avy eo: mazava izany fa fanapahan-keviny ihany koa io fanafoanana ny FMF io. Manahy ny mety hisian'ny korontana ve izy sa ny fialambolin'ny sarambambem-bahoaka mihitsy no tiany foanana?
Faharoa, angaha moa misy manery azy hanao izany fanapahan-kevitra manohitra ny tombontsoam-bahoaka izany? Raha ahenany tapabolana ve ny zon'ny mpiasa hiala sasatra isan-taona dia tena mino tokoa izy fa izay ilay tombontsoam-bahoaka? izay marina ilay antsoina hoe mpanao politika an! ny tombotsoany no lazainy hoe tombontsoam-bahoaka! Efa sitrapo mihitsy izany fa tsy fanerena mihitsy.
Dia aleo aloha atsahatra fa afa-manohy ihany koa ianareo raha te-hanohy!